Sidee looga hor-tagaa qaraxyada Al-Shabaab? - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
Sidee looga hor-tagaa qaraxyada Al-Shabaab?
Magaalada Muqdisho waxay noqotay halboolaha qaraxyada ay ka fuliyaan Ururka Al-Shabaab, Ku dhawaad 15 ruux ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhinteen laba qarax oo maanta lagu weeraray Wasaaraha Arrimaha Gudaha iyo Amniga Dawlada Faderaalka soomaaliya.
Labada qarrax oo loo adeegsaday baabuur walxaha qarxa lagu soo xiray ayaa lala beegsaday dhismaha Otto Otto ee magaalada Muqdisho oo xarun u ah Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Wasaaradda Amniga weerarka ayas ah mid waqti dheer la soo diyaarinayey marka la eegay sida loo fuliyey.
Weerarka wuxuu marqaati ka yahay in Ciidamada amniga Magaalada Moqdisho Rag katirsan ay wada shaqeyn ka dhaxayso kooxda al shabaab. oo markasta fuliya weeraro yaab ku ah shacabka muqdisho ku nool.
Waxaa Falanqeyntan kooban Farta ku fiiqayaa in weerarada noocan ah markey dhacaan aaney waxba ka qaban waa wax lala yaabo.
Haddaba mar kasta waxaa la is waydiiyaa amniga Muqdisho maxaa ka qaldan?
Ciidamada Dowladda maxay wax uga qaban la’yihiin, ayaa fududeeyo Qaraxyada iyo wax lamid ah, iyadoo weliba ay xusid mudan tahay in Ciidamada ugu badan ee dowladda ay joogaan magaaladaan.muqdisho oo ah ciida si wanaagsan loo tababaray Qalab wanaagsen haysta.
Fadeexada noocan ah yaaqaadanay waa in 15 qof ee dhimatay maanta aan si fudud lagu ilaawin waa in xilka laga qaadaa kuwa howshooda dayacay inay shacabku amni helaan wadooyinkii waxay xiran yihiin Qarax yadii way socdaan waa arin u baahan in wax la iska waydiiyo.sidee Qaraxan loo fuliyey?
Inkastoo. Kooxda Shabaab yihiin kuwa baneystay dhigga Shacabka Soomaaliyeed, isla markaasna gaalnimo ku xukmaya, Qofkasta oo fikir kooda ka soo hor jeeda. oo soomaali ah
Hada waa nasiib xumo in dad fikirka al shabaab taageersan yihiin saraakiisha amniga loo xilsaaray. laguna aaminay sirta Qaranka.
Xarunta Oto Oto ayaa aad ugu dhaw dhismaha baarlamaanka iyo iyo xarunta madaxtooyada ee Villa Somalia. Xarakada Al Shabab ayaa sheegatay mas’uuliyadda weerarkani.
Waxaan falanqeyntan Gaaban ku soo gabo gabeynayaa amniga magaalada muqdisho lacag badan ayaa ku baxda.
Waxaan ka warqabnaa in inta badan waddooyinka magaalada ay xiran yihiin oo ay har iyo habeen taagan yihiin ciidamada xasilinta, haddana meesha la wareeraray waa meel adag galitaankeeda sababta weerarka keentayna shaki badan abuuraysa sababtoo ah waa meel aad loo ilaaliyo Laguna gooyay dhagxaan islamarkaana madaxtooyada Soomaaliya u jirta wax ka yar hal KM kana soo horjeeda xarunta guriga baarlamaanka ee gollaha shacabka.
Sidee ayay suurtagal u tahay in Xarumaha dawladda ugu muhiimsan weeraro noocan ah lagu fuliyo waa arin shaki weyn abuuraya in madaxda qaar raali ka tahay amni xarumada caasimadda Soomaaliya? Waa su’aal u baaban jawaab waasac ah oo ay shacabku ka helaan madaxda laanta fulinta oo iyagu masuul ka ah howlaha amniga.
Waa in mucaarad iyo muxaaf aan diidnaa xasuuqa lagu sameynayo shacabka soomaaliyeed waa in si wada jir ah loo dhaleeceeyaa xasuuqan maanta dhacay.
Waxaa oranayaa Inaalilaahi wa innaa ileyhi raajucuun inta dhimatay allaha u naxariisto inta dhaaca ah allaha caafiyo